ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု (2016) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
comments: ဒီလေ့လာမှုက စုံတွဲများအပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ပေမယ်သာတစ်ဦးချင်းစီ (ဆက်ဆံရေးအတွက်, အသက် 28.5 ဆိုလို), မဟုတ်စုံတွဲများ (အတူတူ) နေရာ၌ရှိနေသော်လည်း။ တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်လူမဟုတ်ဟုဖယ်ထုတ်ပြီးအပြင်ကမိတ်ဖက်သာကဆိုသည်တွေ့ဆုံမေးမြန်းဘယ်မှာစုံတွဲများဖယ်ထုတ်ထား အခြား မိတ်ဖက် porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီအကြီး မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနမူနာ,
သင်တန်းသားများကို၏အဖြစ် 75% အမျိုးသမီးခဲ့ကြသည်, ထိုအမျိုးသမီး၏ 59% (Cross-Section လေ့လာမှုနှုန်းထားများထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မား) porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူသူတို့၏အမျိုးအ 38% လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်:
အသုံးပြုသောဘယ်သူမျှတစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများခဲ့သောသူတို့ကိုစုံတွဲများထက် ပို. ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအစီရင်ခံဘယ်မှာစုံတွဲများ,။ ဤသည် (ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Cooper et al ။ , 1999; Manning, 2006), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း၏တစ်ကိုယ်တော်အသုံးပြုမှုအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ... သရုပ်ပြ ... ကျားမအကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပ, တစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများသည် non-အသုံးပြုသူများနှင့် shared အသုံးပြုသူများသည်ထက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးသိသိသာသာလျော့နည်းရငျးနှီးမှုနှငျ့ကတိကဝတ်အစီရင်ခံတင်ပြ.
သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူအမျှတိုက်ပိတ်အသုံးပြုသူများကဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသတင်းပို့ပါ။ အဆိုပါလေ့လာမှုလည်းနှစ်ဦးစလုံးအတူတကွနှင့်စုံတွဲများဘယ်မှာမသုံး porn porn watched ဘယ်မှာစုံတွဲများအကြားနည်းနည်းခြားနားချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အခန်းထဲမှာဆင်: ၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်မဟုတ်ဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တည်းကိုသာစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောကြောင့်ထိုသူနှစ် ဦး စလုံးသည်“ အသုံးမပြုသောသူ” များဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိရသနည်း။ အထူးသဖြင့်စစ်တမ်းကိုဖြေကြားသည့်“ အသုံးပြုသူမဟုတ်သူများ” ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။
ဘယ်လိုမကြာခဏတစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူအမြင်များ porn အရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်:
“ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာကိုမည်သူမည်ဝါကြည့်ရှုသည်ကိုအသုံးပြုသူများ၏အကျိုးဆက်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအရကြိမ်နှုန်းမြင့်သောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်ဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမိုကျေနပ်မှုနိမ့်သောဆက်ဆံရေးနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုပိုရှိနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းမှု၏“ Self-perceived” အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို PCES ကို သုံး၍ အကဲဖြတ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်သုံးစွဲသူများ (HFU) ကတင်ပြခဲ့သည် သာ. ကြီးမြတ်အပြုသဘောရိပ်မိဆိုးကျိုးများ Frequency Users (LFU) ထက်နိမ့်ကျသည်”
လေ့လာမှုတွင်အသုံးချသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်“ အပြုသဘောဆောင်သောရလာဒ်သက်ရောက်မှုများ” ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES) ။ အဆိုပါ PCES တစ်ညံ့ sexology သုတေသနမက်ထရစ်တစ်ဦးချုပ်သာဓကဖြစ်ပါတယ်။ YBOP နှင့်တစ်ဦးကောင်းစွာသိကြစိတ်ပညာပါမောက္ခကဤနေရာတွင်အဘယ်အရာများအတွက် PCES ထိတွေ့: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု, Hald GM က, Malamuth မိုင် (2008) ၏ self-ခံစားသက်ရောက်မှု။ PCES မေးခွန်းများ၏သဘောသဘာဝနှင့်၎င်းတို့မည်သို့အကဲဖြတ်သည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်း။ (ပုံမှန်သဘောမဆန်သော) တွေ့ရှိချက်များ - သင်ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ သင်ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ သင့်ဘ ၀ ၏နေရာတိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘဝအရည်အသွေး၊ အရည်အသွေးပျက်စီးခြင်းနှင့်မတည်ရှိသောလိင်ဘဝကိုလျှော့ချခြင်းသည် PCES တွင်စအိုလိင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်ပိုမိုလွတ်လပ်သောသဘောထားများဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် PCES မေးခွန်းများကိုလျှောက်ထားခြင်း - အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိယောက်ျားလေးတစ် ဦး ကိုတစ်နေ့လျှင် ၅ ကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်ဆိုလျှင်ညစ်ညမ်းသည်သင်၏ဘဝအတွက်အထူးအပြုသဘောဆောင်သည့်ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ PCES တကယ်သည်လက်ရှိလေ့လာမှုကတွေ့ရှိခဲ့သည်ဘယ်လိုချို့ယွင်းချက်တစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဥပမာထဲမှာ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများ (မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း) PCES ၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမေးခွန်းများတွင် ပိုမို၍ ရမှတ်များရရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့၏အစစ်အမှန်ဘ ၀ မှာသိပ်မကြီးလှချေ။ သူတို့မှာဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနိမ့်ကျပြီးသူတို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ရင်းနှီးမှုနည်းပါးသည်။ အဆိုပါအလုပ်သမား ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES) မှလေ့လာမှုအရပိုမိုမြင့်မားသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုဆင်းရဲသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၊ လိင်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်“ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာဘ ၀” နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ “ လိင်မှုဆိုင်ရာဘဝ” မေးခွန်းများနှင့် PCES အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်ပတ်သက်သည့် PCES“ အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ” အကြားဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြသည့်ကောက်နုတ်ချက် -
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းဖြတ်ပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု Dimension PCES အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကြ၏ သို့သော် အမြင့်ကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများအနိမျ့ကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများထက် သာ. ကြီးမြတ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံရှိရာလိင်အသက်ကို subscale အပေါ်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏။
PCES သျောလညျးရိုးရှင်းစွာထားပါ ရမှတ်များ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်လိင်မှုကိစ္စပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည် သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုသိသာထင်ရှားသည့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးကောင်းမေးလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကြိမ်နှုန်းမြင့်သောအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းမှပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောဘ ၀ များနှင့်မည်သို့အဆုံးသတ်သွားခဲ့သနည်း။ ဒါက PCES ရဲ့မှော်ပဲ။ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှု)
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2016 အောက်တိုဘာ 27: 1-8 ။
Minarcik J1, Wetterneck CT2, တိုတောင်းသော MB3.
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို ပို. ပို. အဖြစ်များဖြစ်လာသည်။ လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (SEMs) ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု (Schneider, 2000b) သတင်းပို့ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ သို့သော် Bridges (2008b) အတူတကွ SEM ကိုအသုံးပြုဖို့သူအစုံတွဲများလွတ်လပ်စွာ SEM ကိုအသုံးပြုဖို့သောသူထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးစိတ်ကျေနပ်မှုရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးအတွက် SEM အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးသို့တစ်ဦးကထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေး SEM စုံတွဲကျေနပ်မှုအမျိုးမျိုးဒေသများသို့ဆက်စပ်သည်မည်မျှမီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်ဆံရေးမျိုးဒိုင်းနမစ်နှင့်ဆက်စပ်သော SEM အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ကောလိပ်နှင့်အင်တာနက်နမူနာပါဝင်သူ ၂၉၆ ဦး ပါ ၀ င်သည်။ အုပ်စုများတွင် SEM အသုံးပြုမှုကိုအခြေခံသည် (ဥပမာ - SEM တစ်ခုတည်း၊ မိတ်ဖက်နှင့် SEM အသုံးပြုခြင်းနှင့် SEM အသုံးမပြု) ။
ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုအတွက်အုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု [F (2, 252) = 3.69, p = .026], ရငျးနှီး [F (2, 252) = 7.95, p = <.001] နှင့်ကတိကဝတ် [F ကို, 2, 252) 5.30, p = .006] ။ Post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SEM အသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု [t (174) = 2.13, p = .035] နှင့်ရငျးနှီး [t (174) = 2.76, p = .006] တွင်နောက်ထပ်ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။
စုံတွဲများအတွက် SEM အသုံးပြုမှု function ကိုထပ်မံတူးဖော်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးတွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုပိုမိုနားလည်မှုပေးလိမ့်မယ်။
KEYWORDS: စုံတွဲများ; ညစ်ညမ်း; ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု; ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ
ညစ်ညမ်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုး [လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEM) နဲ့လဲလှယ်ပါလိမ့်မည်] (နောက်ထပ်အသုံးပြုသူများနှင့်လူ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုလေ့လာစူးစမ်းဖို့သုတေသီများသတိပေးခံရထားပါတယ်Schneider, 2000a, 2000b) ။ နည်းပညာအဆင့်မြင့်သည်အတိုင်း, SEM ဖြန့်ဖြူးကိုလည်းအရှင်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်အသစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကို formats ဖို့အဆင်ပြေအောင်သိရသည်။ လောလောဆယ် 4.2 သန်းညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တိုင်းဒုတိယ, $ 3,000 ကျော် (SEM သုံးစွဲလျက်ရှိသည်Ropelato, 2010) ။ သာ. ကြီးမြတ်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, တတ်နိုင်နှင့်ရိပ်မိအမည်ဝှက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမှာ "Triple-တစ်ဦးကအင်ဂျင်" သီအိုရီ (အင်တာနက်ပေါ်ရှိ SEM ၏တိုးလာအသုံးပြုမှုအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါCooper က, 1998).
ကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်းပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စွမ်းဆောင်ရည်၏ချွတ်ယွင်း, ဒုက္ခဆင်းရဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (အပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့များစွာသောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိသည်တွေ့ရှိထားသည်Cooper, Putnam, Planchon, & Boies, 1999; Manning, 2006), နှင့်ကျူးကျော် (Allen, D'Alessio, & Brezgel, 1995; Donnerstein, Donnerstein, & အီဗန်, 1975) ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ related ပြဿနာတွေအပြင် SEM အသုံးပြုမှု (ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်အခက်အခဲများတိုးမြှင့်ထားပါတယ်Deloy, 2007; Oddone-Paolucci, Genuis, & Violato, 2000) ။ ပိုများသောအထူးသ, တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့် (တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ကျဆင်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှဦးဆောင်တံတားများ, 2008a; Deloy, 2007; Schneider, 2000a, 2000b; Yucel & Gassanov, 2010).
ထိုအကြားဆက်ဆံရေးအခက်အခဲဆန်းစစ်တဲ့အခါ, SEM ၏အသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းသွားအိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်နွေးထွေးမှု၏ခန့်မှန်းဖြစ်ပါတယ် (Schneider, 2000a, 2000b) နှင့်ခွဲခြာနှင့်ကွာရှင်းဖို့အဓိကပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ် (Schneider, 2000b) ။ (တကယ်တော့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲပြဿနာများနှင့်အတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုမကြာခဏအနိမ့်ကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုရှိသည်, သူတို့အားကြားဆက်ဆံရေးအစီရင်ခံစာလျှို့ဝှက်အတွင်းတိုး, အထီးကျန်မှုတွေများနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်မိတ်ဖက်Carnes, 1992; Schneider, 2000b; Wildmon-White & Young က, 2002) ။ ဤရွေ့ကားအခက်အခဲများမကြာခဏလိင်အတွက်အကျိုးစီးပွားအရှုံးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီး (ထဲမှာရရှိလာတဲ့, တစ်ဦးတည်းသာမိတ်ဖက်မှန်မှန် SEM အသုံးပြုမှုများတွင်ပါဝင်နေသည်အဘယ်မှာရှိစုံတွဲများအတွက်ပိုပြီးသိသာများမှာSchneider, 2000b).
(အဖော်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူ, Zillmann နှင့် Bryant1984, 1988) ညစ်ညမ်းမှဦးဆောင်ကြည့်ရှုတဦးတည်းရဲ့လက်တွဲဖော်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိရ, အမျိုးသမီးဆီသို့ရှိရာသို့ သွား. တိုးမြှင့်လိင်၏သဘောထားအမြင်ပုံပျက်နှင့်မယားနှင့်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ဖို့ related တန်ဖိုးများယုတ်လျော့လေ၏။ သုတေသနကိုလည်း (ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသာမန်အပြုအမူအဖြစ် Non-monogamous ဆက်ဆံရေး၏တဦးတည်းရဲ့တရားသဖြင့်စီရင်တိုးပွါးကြောင်းပြသထားပါတယ်Drake, 1994).
မိတ်ဖက်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများအပြင်ယောက်ျား၏မိတ်ဖက် SEM ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏တုံ့ပြန်မှုကိုလေ့လာထားသည်။ ယောက်ျား၏ SEM အသုံးပြုမှုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုအမျိုးမျိုး (ဥပမာ - သစ္စာဖောက်ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။Schneider, 2000a, 2000b) ။ သူတို့ရဲ့အထီးမိတ်ဖက်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သူအမျိုးသမီး, မကြာခဏ (လိင်, မလိုလားအပ်သောအချည်းနှီး, အားနည်းခြင်း, မိုက်မဲအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုရန်စတင်Bergner & Bridges, 2002).
ညစ်ညမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိနေသော်လည်းအချို့သောလေ့လာမှုတွေ (အတူတကွ SEM ကိုအသုံးပြုဖို့သူအစုံတွဲများလွတ်လပ်စွာ SEM ကိုအသုံးပြုဖို့သူအများထက်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေရှိစေခြင်းငှါတွေ့ပြီတံတားများ, 2008b; Bridges & Morokoff, 2010; Schneider, 2000a, 2000b) ။ ဒါ့အပြင်သာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီသည် non-အသုံးပြုသူများနှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ဖို့တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အပျနှံအဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, SEM မျှဝေသတင်းပေးပို့သူကိုစုံတွဲများ, (အတူတကွ SEM မသုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူစုံတွဲများထက်ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များထောက်ခံတံတားများ, 2008b).
ရင်ခုန်စရာအတွက် SEM အသုံးပြုမှု context
ယခင်သုတေသနအတွက်ရောထွေးသောရလဒ်များကိုပေးထားသောကြောင့် SEM ၏ shared အသုံးပြုခြင်းနှင့်မိတ်ဖက်အသုံးပြုမှုကိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းနားလည်နိုင်သည်။ ရလဒ်ရှုပ်ထွေးကြောင်းတစ်ခုမှာပြဿနာ SEM အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောဆက်ဆံရေးအတွက်မျှဝေ၏အဆင့်ပါ။ ပိုများသောအထူးသ, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက် SEM ၏အသုံးပြုမှုကိုလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီသုံးစွဲသူများမိတ်ဖက်သုံးစွဲသူများသီးခြားသုံးစွဲသူများ shared သုံးစွဲသူများနှင့် Non-အသုံးပြုသူများသည်: ယေဘုယျအားဖြင့်, အကောင့်ထဲသို့ SEM ရှိနေခြင်း၏မိတ်ဖက်ရဲ့အမြင်ယူပြီးသည့်အခါထို့အပွငျ, SEM အသုံးပြုမှုငါးခုအုပ်စုများရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, လူတစ်ဦးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်မျိုးစုံ SEM အုပ်စုများပိုင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအသီးအသီးအဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အခါ, အသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများအသီးအသီးအမျိုးအစားထဲမှာလူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ကွဲပြားနိုင်သည်။ SEM အသုံးပြုမှုရှုပ်ထွေးနားလည်ခြင်းလည်း SEM အသုံးပြုမှုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အခန်းကဏ္ဍနှင့် SEM အသုံးပြုမှုဒိုင်းနမစ်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက် (နှင့်အစီရင်ခံကျေနပ်မှုအပေါ်နောက်ဆက်တွဲသက်ရောက်မှု) ကိုရှင်းပြရန်, ထိုသို့သောရငျးနှီးသို့မဟုတ်ကတိကဝတ်အဖြစ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆောက်လုပ်ရေး, စူးစမ်းဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
တဦးတည်းရဲ့ SEM အသုံးပြုမှုတစ်ဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့အနက်ကိုဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်နှစ်သစ်စေမှု impact နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့, Bridges (2008a) SEM အသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆိုးကျိုးများကျား, မ, အမိတ်ဖက် '' အသုံးပြုမှုသဘောထားအမြင်နှင့် SEM အသုံးပြုမှု function ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီး SEM အသုံးပြုသောဘယ်မှာစုံတွဲများအတွက်, နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်အမျိုးသမီး SEM ကိုအသုံးမပြုခဲ့ရသောစုံတွဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာကျေနပ်နှစ်သစ်စေမှုရှိခြင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး SEM မသုံးခဲ့ဘူးဘယ်မှာဆက်ဆံရေးမှာတော့ SEM ၏အထီးရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏ရမှတ်များထိခိုက်။ ထို့ပြင်တွေ့ရှိချက် (အထီးယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးတိုက်ပိတ်, masturbatory အကူအညီအဖြစ်အသုံးပြုအစီရင်ခံနေစဉ်အမျိုးသမီးများအတွက် SEM အသုံးပြုမှုအများဆုံးထောက်ခံ function ကို, မေတ္တာချမှတ်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖွစျကွောငျးကိုထုတ်ဖော်ပြသတံတားများ, 2008a, p ။ 79) ။
ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု၏အပြင်ဘက်တွင်ကတိကဝတ်, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်နွေးထွေးမှု SEM အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးအရည်အသွေးလေ့လာမှုများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (ထိုအစီရင်ခံဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ရောထွေးသောသက်ရောက်မှုရှိသည်မယ်လို့Benjamin & Tlusten, 2010) ။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့အမျိုးသမီးညစ်ညမ်းလက်ခံနှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိတ်အားထက်သန်ဖွံ့ဖြိုးရန်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အခြားအမျိုးသမီးရငျးနှီး၏ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များကြည့်ရှုသူတို့၏လိင်အတွက်ကှာအတွက်ရလဒ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုနောက်ထပ်, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာစတိုင်များ (Sternberg ရဲ့သီအိုရီဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်), စိတ်ကျေနပ်မှုအတိုင်းအတာများနှင့် SEM အသုံးပြုမှု Self-အစီရင်ခံအကျိုးဆက်များဆန့်ကျင် SEM အသုံးပြုမှုဆက်စပ်အကြားအထူးဆက်ဆံရေး SEM အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြဖို့ရှာတတ်၏။ ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ခြင်းဖြင့် SEM အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု Exploring အသစ်တစ်ခုကိုလယ်ရှိ၏ အရှင်သည်ဤလေ့လာမှုသုတေသနတစ်ထောငျခါခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တည်ဆောက်နေသည်။
တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်အစီရင်ခံအဖြစ်လက်ရှိလေ့လာမှုရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက် SEM ၏အသုံးပြုမှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဆောင်ရွက်ချက်များချစ်ခြင်းမေတ္တာစတိုင်များ [ရငျးနှီး, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကတိက (IPC)], ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် SEM အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာအပါအဝင် SEM အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောစေခြင်းငှါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်များအကဲဖြတ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုအရာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုများအကြား SEM ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်: (က) ကိုသာပါဝင်သူ SEM, (ခ) နှစ်ခုလုံးကိုမိတ်ဖက်အတူတကွ SEM ကိုသုံးပါ, သို့မဟုတ် (ဂ) ကိုအသုံးပြုသည်မဖက်အသုံးပြုမှု SEM ။ Bergner နှင့် Bridges (2002) SEM အသုံးပြုမှုကိုအမြဲတမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်ထုတ်ဖော်မပေးကြောင်းညွှန်ပြပေးသောသူတို့ဖက် SEM ကိုအသုံးပြုသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါအမျိုးသမီးရှိသည်သောတုံ့ပြန်မှု, အမှာစကားပြောကြားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, မိတ်ဖက်အသုံးပြုသူများနှင့်သီးခြားအသုံးပြုသူများအမပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ non-သုံးပြီးမိတ်ဖက်ခြင်းဖြင့် SEM အသုံးပြုမှုကိုက်ညီမှုများနှင့်တစ်ချိန်ချိန်တိသညာရှိပါတယ်လျှင်ထပ်မံလေ့လာမှုများဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
သင်တန်းသားများကို, 18 နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေနှင့်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်, နည်းလမ်းများ, က်ဘ်ဆိုက်ကြော်ငြာနှင့်မိတ်ဖက်ရည်ညွှန်းအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအတူတူတက္ကသိုလ်, "snowball" မှာလူတန်းစားကြေညာချက်များ, တက္ကဆက်ပြည်နယ်များတွင်တစ်ဦး Mid-size ကိုတက္ကသိုလ်အွန်လိုင်းမှလေ့လာမှုပါဝင်သူရေကူးကန်စနစ်ကတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကဲ့သို့သောယေဘုယျ-ရည်ရွယ်ချက်ကြော်ငြာက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်တင်ခြင်းလေ့လာမှုကြော်ငြာများပါဝင်ပတ်သက်က်ဘ်ဆိုက်ကြော်ငြာမှတဆင့််ထမ်းခေါ်ယူမှု, www.craigslist.com, www.backpage.comနှင့် www.facebook.com.
ဒေတာများစုဆောင်းခြင်း6လအတွင်းရာအရပျကိုယူ။ အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်မှသွားလာပေါ်၌ရှိသမျှသောသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုမိမိဆန္ဒအလျောက်ခဲ့ကြပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်လေ့လာမှုကနေဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ကြောင့်လေ့လာမှုမေးခွန်းများကို၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောသဘာဝရန်, ခွင့်ပြုချက်၏လက်မှတ် anonymity ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သက်ညှာခဲ့ပါတယ်နှင့်သင်တန်းသားများကို IRB အတည်ပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ, သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ညွှန်ပြတဲ့ box ကိုစစျဆေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖှပြီးနောက်သင်တန်းသားများမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။ ဟုမေးစစ်တမ်း၏ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းကိုပါဝင်သူရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ status ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ "လက်ရှိရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ခုတည်း / မဟုတ်" လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောသူများသည်သူတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီကြဘူးကြောင်းအသိပေးခံခဲ့ရသည်နှင့်လေ့လာမှုထဲကမထွက်ခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးငါးဆယ်-ဒေါ်လာစျေး Raffles များအတွက်ပုံဆွဲရိုက်ထည့်လိုလျှင်လေ့လာမှုပြီးစီးပြီးနောက်သူတို့ Raffles entry ကိုချိတ်ဆက်ထားခံရခြင်းမှစစ်တမ်းအဖြေကိုတားဆီးပေးသောသီးခြားဒေတာဖိုင်မှဦးဆောင်မယ့် link ကိုကလစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Raffles အနိုင်ရသူနှစ်ဦးကိုသင်တန်းသားများ, သူတို့ကိုပို့ဆုကိုပိုက်ဆံရှိသည်ဖို့စီစဉ်ဖို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်။ တက္ကသိုလ်ကနေသင်တန်းသားများပါဝင်မယ့်အစား၏ Raffles ဝင်ဘို့အပိုချေးငွေ၏အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့ကြသည်။ သူတို့အပိုချေးငွေလိုချင်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့အကြွေးတာဝန်ပေးအပ်နိုင်ဒါအပိုသူတို့နာမကျန်ရစ်တဲ့သီးခြားဒေတာဖိုင်မှဦးဆောင်မယ့် link ကိုကလစ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုအများစုဟာ (non-ကျောင်းသားနမူနာကနေ 65% တည်ကြသည် ဖြစ်. , n = 192) ။ သင်တန်းသားများကို 75-25 နှစ်ကအသက် 221 အထီး (75%) နှင့် 18 အမျိုးသမီး (87%) ပါဝင်သည်။ ပါဝင်သူများ၏ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၂၈.၅၁ နှစ်ဖြစ်သည် (SD = 9.40) ။ ၎င်းတို့၏လက်ရှိဆက်နွယ်မှုရှိတစ် ဦး ချင်းစီသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၅.၃၆ နှစ်ရှိခဲ့သည်။SD = 6.60) ။ သင်တန်းသားများကို, 97% လိင်ကွဲဖြစ်ကြပြီး 3% လိင်တူဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ လူမျိုးစုအရဤနမူနာအများစုသည်ကော့ကေးဆပ် (၆၅.၂%)၊ ဟစ်စပန်းနစ် (၁၈.၉%)၊ အာဖရိကန်အမေရိကန် (၇.၄%) နှင့်အခြား (၈.၅%) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ (38.1%) လက်ထပ်နှင့် (62.9%) လက်မထပ်ရသေးသို့ dichotomized ခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်သည်ပါဝင်သူ (3.47 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှများအတွက်လက်ထပ်ခဲ့ကြSD = 7.11) ။ ပါ ၀ င်ဖြေသူအများစုသည်သီးသန့်ဆက်ဆံရေး (၈၅.၂%) တွင်ရှိကြောင်း၊ ၈.၀% သည်အတော်အတန်သီးသန့်ဆက်ဆံရေးရှိကြောင်းနှင့် ၆.၈% မှာသီးသန့်မဟုတ်သောဆက်ဆံရေးရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ပါဝင်သူ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်လိင်ပိုင်းအရတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ၄ င်းတို့၏လက်ရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူ ၅.၃၇ နှစ်ကြာလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ကြသည် (SD = 6.80) ။
သင်တန်းသားများဆက်ဆံရေးအတွက်ပစ္စုပ္ပန် SEM အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားအပေါ်မှာအခြေခံသုံးအုပ်စုများသို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများ (ဖြစ်ပါတယ်n = 72-79; ဇယားကိုကြည့်ပါ 1), အရာအတွက်သင်တန်းသားများကို SEM သုံးပြီးဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောလူတစ်ဦးရှိပါတယ်။ အဆိုပါဒုတိယအုပ်စု shared အသုံးပြုသူများသည် (ဖြစ်ပါတယ်n မိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးသည် SEM ကိုအတူတကွဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဟုအစီရင်ခံသောသင်တန်းသားများဖြစ်သည်။ တတိယအုပ်စုသည်အသုံးပြုသူများမဟုတ်ပါ (n ဆက်ဆံရေးတွင်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှ SEM အသုံးပြုခြင်းမရှိဟုအစီရင်ခံသောတစ် ဦး ချင်းဖြစ်သည့် = 93-108) ။
စားပွဲတင် 1 ။ တစ်ခုချင်းစီကိုမှီခို variable ကိုသုံးအုပ်စုများကနည်းလမ်, စံသွေဖီနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလ (95%)
၏ range n 93-108 72-79 68-71
အထီး (%) 13.9 43 35.2
ကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု 25.22 (5.62) (24.15-26.30) 23.19 (6.03) * (21.84-24.54) 25.25 (4.89) (24.10-26.41)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု 20.54 (14.87) (17.48-23.60) 23.07 (14.53) (19.68-26.43) 21.46 (12.30) (18.53-24.39)
ရင်းနှီးမှု 6.22 (0.96) (6/03–6.40) 5.56 (1.43) * (5.24-5.88) 6.14 (0.93) * (5.92-6.36)
စှဲလနျးခွငျး 5.73 (1.34) (5.47-5.99) 5.53 (1.29) (5.24-5.82) 5.90 (1.17) (5.62-6.17)
ကတိသစ္စာ 6.25 (1.17) (5.52-5.83) 5.70 (1.66) * (5.04-5.54) 6.35 (1.01) * (5.50-5.84)
ဗေဒင် - 1.86 (1.19) (1.61-2.15) 1.75 (1.18) (1.49-2.06)
ဗေဒင် - 2.63 (0.98) (2.40-2.87) 2.53 (1.25) (2.24-2.84)
မှတ်စု။ အဆိုပါ n ယင်းအထဲက drop ကြောင့်မှီခို variable တွေကို, ပျောက်ဆုံးဒေတာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီလိင်တက်ကြွခဲ့ဖြစ်စေမအကြားကွဲပြားအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီသည်။ PED = အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာ, NED = အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာ, SL ဆန့်ကျင်ဘက်ကျားမဆီသို့သဘောထားတွေအထွေထွေ, PATOG = အမြင်, လိင်နှင့် SK ကို = လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာဆီသို့ ATS = သဘောထားတွေအတွက် LG က = အသက်, လိင်ဘဝ = ။
*p = .05 ။
အဆိုပါလေ့လာမှုမေးခွန်းလွှာ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံများစွာပါဝင်သည်။ စားပှဲ 1 တစ်ခုချင်းစီကိုမှီခို variable ကိုများအတွက်အုပ်စုတစ်စုအားဖြင့်နည်းလမ်းနှင့်စံသွေဖီဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အပိုင်းအခြားအားလုံးပါဝင်သူများအပေါ်ရရှိသောနှင့်အသက်, လိင်, ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေ, လူမျိုးရေး, လိင်နှင့်ဘာသာတရားအကြောင်းမေးခွန်းများကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာစကေးကလက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ SEM အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည် "ဆိုသည်ကိုအားလုံးသဘောတူညီပျြောမှေ့စ, အကြမ်းမဖက်, Non-စော်ကားသော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကမြားတှငျပါဝငျခွငျးနှစ်ခုအရွယ်ရောက်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့မည်သည့်ပစ္စည်း။ " လက်ရှိ SEM အသုံးပြုမှု SEM များအတွက်အကြိမ်ရေ (တစ်လလျှင်အသုံးပြုသောတစ်လလျှင်နာရီ, ကြိမ်) နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာသို့မဟုတ်အကြောင်းရင်းများကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့သည် အသုံးပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သော SEM မီဒီယာအမျိုးအစားကိုအသုံးပြု SEM အမျိုးမျိုးများ၏ content ကဲ့သို့သောအခြား variable တွေကို, အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ မေးခွန်းများကို၏တူညီသောစီးရီးသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့အသုံးပြုမှုပတ်သတ်ပြီးအတွက်တောင်း SEM ၏အသုံးပြုမှုကိုမျှဝေခဲ့သည်။
Dyadic ညှိနှိုင်းမှုစကေး (Das-7)
အဆိုပါ Das-7, မူရင်း 32-ကို item စကေးတစ်ဦးကိုတိုဗားရှင်းမေးခွန်းလွှာ (ခုနစ်ခု Likert-type အမျိုးအစားပစ္စည်းများပါဝင်သည်Hunsley, အကောင်းဆုံး, Lefebvre, & Vito, 2001) ။ ပထမသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သောသင်တန်းသားများကို0မှ5(အမြဲတမ်းသဘောမတူ) (အမြဲတမ်းသဘောတူ) မှသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ဒီဂရီညွှန်ပြရန်သုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာများကို (ဒဿန, ပန်းတိုင်, နှင့်အချိန်ကိုအတူတကွသုံးစွဲ) အပေါ်သဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်များထားရှိရေး။ ဒုတိယသုံးပစ္စည်းများစုံတွဲလှုပ်ရှားမှုများ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များထားရှိရေးနှင့်သင်တန်းသားများကို (ပိုမကြာခဏတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထက်)0(ဘယ်တော့မှ) မှ5ဤလှုပ်ရှားမှုများ၏ကြိမ်နှုန်းညွှန်ပြ။ နောက်ဆုံးကို item သင်တန်းသားများကို7(အလွန့်အလွန်မပျော်) မှ0(ပြီးပြည့်စုံသော) အထိတစ်ဦး 6-အမှတ်စကေးအပေါ်သဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ဒီဂရီညွှန်ပြပေးသောဖို့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပျော်ရွှင်မှုအလုံးစုံဒီဂရီအကြောင်းကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးစိတ်ကျေနပ်မှုကိုဆိုလိုတာ။
အဆိုပါ Das-7 α = 0.78 ထံမှ 0.75 အထိစမ်းသပ်-retest ယုံကြည်စိတ်ချရ (အပြင်လုံလောက်သောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (Cronbach ရဲ့α = 0.80) သရုပ်ပြထားပါတယ်Hunsley et al ။ , 2001) ။ ရမှတ်များ0(စိတျပူပ) မှ 36 (Non-ဒုက္ခရောက်နေ) အထိ။ ဒီနမူနာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောင်းသောရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (Cronbach ရဲ့α = 0.82) ပြသထားတယ်။
အဆိုပါနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း (ဆက်ဆံရေးအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တိုးပွားသို့မဟုတ်မကျေနပ်မှုများဒီဂရီအကဲဖြတ်တစ်ဦး 25-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်Hudson, Harrison, & Crosscup, 1981) ။ အဖွမြေား 1 (ရှားပါးသောဒါမှမဟုတ်အချိန်အဘယ်သူမျှမ) မှ5(အများစုမှာဒါမှမဟုတ်အချိန်အားလုံး) အထိ, နှင့် 25-ပစ္စည်းများဖြတ်ပြီးချုပ်ဖော်ပြနေကြသည်။ ကြောင့်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအမှားမှတစ်ဦး abridged 24-ကို item စကေးအသုံးပြုခဲ့သည်; မူရင်း validation ကိုလေ့လာမှု (ထိုစကေး၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှု၏သမာဓိရှိတက်မှမေးခွန်းနှစ်ခုပျောက်ဆုံးနေလျှင်ပင်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်Hudson et al ။ , 1981) ။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်ပိုပြီးမကျေနပ်မှုကိုထင်ဟပ်လျက်, လက်တွေ့ cutoff 30 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည်တွင်းရေး Cronbach ရဲ့α = 0.92 ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်α = 0.93 ၏စမ်းသပ်မှု-retest ယုံကြည်စိတ်ချရ (ရှိပါတယ်Hudson et al ။ , 1981) ။ ထို့အပြင်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတရားဝင်မှုစွမ်းရည် (မြင့်မားသည်Hudson et al ။ , 1981) ။ ဒီနမူနာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောင်းသောရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (Cronbach ရဲ့α = 0.89) ပြသထားတယ်။
အဆိုပါ PCES (ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Self-ရိပ်မိအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ထားပါသည်တစ် 47-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်Hald & Malamuth, 2008) ။ ဒါဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာ (PED) နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာ (NED) အပါအဝင်နှစ်ဦးကိုအဓိကအကြောင်းရင်းများ, ပါဝင်ပါသည်။ လိင်ဘဝ (SL), ယေဘုယျအားဖြင့်အသက်တာကို (LG က), ဆန့်ကျင်ဘက်ကျား, မ (PATOG) ဆီသို့သဘောထားတွေ၏အမြင်, လိင်ဆီသို့သဘောထားများ (ATS) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ (SK ကို) အပါအဝင်အယူအဆရေးရာ subscales လည်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ PCES တစ်ဦးစုစုပေါင်းရမှတ်ရှိသည်ပါဘူး, အစား 11 subscales (အားလုံး subscales များအတွက် 1-7 အကွာအဝေး) အစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်သူတုံ့ပြန်မှု (အနေနဲ့အလွန့်အလွန်ကြီးမားအတိုင်းအတာအထိ) 1 မှ7ကနေ (မအားလုံးသည်မှာ) အထိ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ PED 27-ပစ္စည်းများပျမ်းမျှအားဖြင့်ရရှိသောသည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ NED 20-ပစ္စည်းများပျမ်းမျှအားဖြင့်ရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များပိုမိုမြင့်မားသဘောတူညီချက်ဖော်ပြသည်။
PED အတွက်အကြီးစားယုံကြည်စိတ်ချရမှု (ဆိုလိုသည်မှာ Cronbach ၏α) သည် ၀.၉၁ ဖြစ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောခန့်မှန်းချက်များမှာ ၀.၉၁ (SL)၊ 0.91 (SK), 0.91 (ATS), 0.90 (GL) နှင့် 0.90 (PATOG) တို့၏ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုစီအတွက်ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်မှုတစ်ခုစီအတွက် 0.87 (GL)၊ ၀.၈၁ (ATS)၊ ၀.၇၁ (SL) နှင့် ၀.၇၂ (PATOG) တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုခန့်မှန်းချက်အရ NED အတွက်အပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ၀.၈၂ ဖြစ်သည်။Hald & Malamuth, 2008) ။ ဒီနမူနာများအတွက် PED နှင့် NED ၏ယုံကြည်စိတ်ချရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (အသီးသီး Cronbach ရဲ့α = 0.95 နှင့်α = 0.92) ပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါ IPC မတ်ေတာ၏တြိဂံသီအိုရီပါဝင်သောသုံးခုအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခု 19-item တခုကိုအတိုင်းအတာ (ဖြစ်ပါတယ်Sternberg, 1986): ရငျးနှီး (7-ပစ္စည်းများ), စိတ်အားထက်သန်မှု (8-ပစ္စည်းများ) နှင့်ကတိကဝတ် (8-ပစ္စည်းများ, Lemieux & Hale က, 2000) ။ အဆိုပါ IPC တစ်ဦးစုစုပေါင်းရမှတ်ရှိသည်ပါဘူး, အစားတစ်ဦး (ရငျးနှီးမှုအတွက် 7-49 အကွာအဝေးနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကတိက subscales များအတွက် 8-56 အကွာအဝေး) သုံး subscales ၏အစုံပါပဲ။ ပါဝင်သူတုံ့ပြန်မှု 1 မှ7(လုံးဝသဘောမတူ) (လုံးဝသဘောတူ) မှအထိ။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များကြောင်းကို item ၏မြင့်မားသောထောက်ခံချက်တူညီ။ ရငျးနှီး (α = 0.89), စိတ်အားထက်သန်မှု (α = 0.94), နှင့်ကတိကဝတ် (α = 0.89): ကောင်းမွန်သောကိန်းယုံကြည်စိတ်ချရအားလုံးသုံး subscales အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ IPC အကြေးခွံဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုကိုအတိုင်းအရှည် (α = 0.96) နဲ့အကောင်း convergence တရားဝင်မှုရှိသည်။ ဒီနမူနာများအတွက် IPC subscales ၏ယုံကြည်စိတ်ချရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (အသီးသီး Cronbach ရဲ့α = 0.91, α = 0.94 နှင့်α = 0.92) အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုပြတော်မူ၏။
အဆိုပါဒေတာ SPSS 16.0 သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းများအကြား-အုပ်စုတစ်စုအတူတူတစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူများ shared အသုံးပြုသူများအ SEM နှိုင်းယှဉ်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် Non-အသုံးပြုသူများကိုအာရုံစိုက်လေ့လာဆန်းစစ်။ covariance မော်ဒယ်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အတိုင်းအတာ SEM အသုံးပြုမှုများ၏အုပ်စုသုံးစုအကြား Das-7 နှင့်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းတွင်တွေ့သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပေးထားသောသုတေသနကျား, မများက SEM အသုံးပြုမှုအတွက်ခြားနားချက်ကိုပြသထားပါတယ်, ကျား, မလည်းတစ်ဦးအပြန်အလှန်သက်တမ်းအဖြစ်အလားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများလေ့လာစူးစမ်းဖို့တစ်စက္ကန့်လွတ်လပ်သော variable ကိုအဖြစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ မဆိုသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု (p ကှဲလှဲ (ANOVA) ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှ <.05) ကိုနောက်ထပ် ၀.၅၅ αအဆင့် အသုံးပြု၍ Tukey ၏ရိုးရိုးသားသားထူးခြားသည့်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူထပ်မံလိုက်လံခဲ့သည်။ SEM ကိုအသုံးပြုသောအုပ်စုနှစ်ခုတွင်ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ SEM အုပ်စု၏ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန် ANOVAs A series တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
post-hoc SEM အသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းမှာရှာဖွေနေဒီ variable ကိုရလဒ်များကိုထိခိုက်လျှင်ကြည့်ဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြလေ့လာဆန်းစစ်။ tSEM အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေသည်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု၊ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်သုံးစွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်စမ်းသပ်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြိုတင်လေ့လာချက်တွင်ဖော်ပြထားသောစံနှုန်းများကို အခြေခံ၍ အုပ်စုများကိုအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများ (HFUs၊ ဆိုလိုသည်မှာတစ်လလျှင် ၁ နာရီကျော်) နှင့်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းအသုံးပြုသူများ (LFUs၊ ဆိုလိုသည်မှာတစ်လ ၁ နာရီအောက်သာ) သို့ခွဲဝေသည်။တံတားများ, 2008a).
ဒီလေ့လာမှုကဟူစတန်-Clear ကိုရေကန်ရဲ့ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့တက္ကသိုလ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကြောင့်လေ့လာမှုမေးခွန်းများကို၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောသဘာဝရန်, ခွင့်ပြုချက်၏လက်မှတ် anonymity ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သက်ညှာခဲ့တာနဲ့တက်ရောက်လာသူများကို၎င်းတို့၏သဘောတူညီချက်ညွှန်ပြတဲ့ box ကိုစစျဆေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖှပြီးနောက်သင်တန်းသားများမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။
ဒေသစစ်တမ်းများနှင့် SEM အသုံးပြုမှု
အထီး [အမျိုးသမီး (80%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (59%) χသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက် SEM သုံးပြီးခံရဖို့သိသိသာသာပိုပြီးခဲ့ကြသည်2 (1) = 17.25, p <.001] ။ SEM အသုံးပြုသူသုံးမျိုးအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျား၊ မကွဲပြားမှုရှိသည်2 (2) = 20.99, p <.001] ။ အမျိုးသားများသည်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီအနေနှင့်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသည် (p = .008) နှင့်အသုံးပြုသူမဟုတ်သူဖြစ်ရန်သိသိသာသာလျော့နည်းဖွယ်ရှိ (p = .002) ။
SEM အုပ်စုများ၏သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများမှာလိုက်ရှာ, လက်ထပ်နေသောသူတို့ကိုနဲ့လက်ထပ်မဟုတ်သောသူတို့၏အကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု [χရှိခဲ့သည်2 (2) = .957, p = .620] ။
စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာ variable တွေကိုဖြတ်ပြီး SEM အသုံးပြုမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ
ယေဘုယျအားတစ်ဦး SEM အသုံးပြုဆက်ဆံရေးဟာ variable တွေကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအရေအတွက်နှင့်စားပွဲတင်ရှိခဲ့သည်2ကျား, မများနှင့် SEM အသုံးပြုမှုကိုအမျိုးအစားအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးဟာ variable တွေကို (ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် IPC) တွင်ခြားနားချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများအတွက် Non-အသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု, နွေးထွေးမှုနှင့်ကတိကဝတ်နှင့်ဆက်စပ်သောအောက်ပိုင်းရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများ shared အသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးထက်ရငျးနှီးမှုနှငျ့ကတိကဝတ်အပေါ်သိသိသာသာနိမ့်ရမှတ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဘို့အသိသာကျား, မကွဲပြားမှုတစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည်, F(1, 230) = 3.36, p = .068, အထီးအမျိုးသမီးများထက်စိတ်ကျေနပ်မှုနိမ့်အဆင့်ဆင့်ညွှန်ပြအတူ။
စားပွဲတင်2။ နည်းလမ်များနှင့်မှီခို variable တွေကိုများ၏နှိုင်းယှဉ်ကျား, မအားဖြင့်၎င်း, ဆက်ဆံရေးအတွက် SEM အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား
F နှင့် p အဘိုး
ယောက်ျား 25.14 F(1, 252) = 1.06, p = .305 24.34 F(1, 230) = 3.36, p = .068 * 5.94 F(1, 252) = 0.19, p = .661 5.67 F(1, 252) = 0.46, p = .499 5.61 F(1, 252) = 0.41, p = .551
အမျိုးသမီး 24.31 20.38 6.02 5.79 5.53
တစ် ဦး ချင်းအသုံးပြုသူ 23.24 F(2, 252) = 3.69, p = .026 ** 23.29 F(2, 230) = 0.21, p = .812 5.54 F(2, 252) = 7.95, p ≤ .001 *** 5.50 F(2, 252) = 1.67, p = .191 5.29 F(2, 252) = 5.30, p = .006 **
အသုံးပြုသူမျှဝေသည် 25.39 22.05 6.14 5.87 5.69
အသုံးပြုသူမဟုတ်သူ 25.55 21.74 6.23 5.81 5.74
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု F(2, 252) = 0.01, p = .992 F(2, 230) = 0.03, p = .973 F(2, 252) = 0.64, p = .531 F(2, 252) = 0.96, p = .386 F(2, 252) = 0.41, p = .666
*p = .10, **p = .05, ***p = .001 ။
ဒီမေးခွန်းလွှာညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ Self-ရိပ်မိခြုံငုံအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ထားပါသည်ကတည်းကကြောင့်သာတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများနှင့် shared အသုံးပြုသူများတင်ဆက်ခဲ့သည်။
လွတ်လပ်သော tအဆိုပါ PCES PED ရမှတ်၏ -test တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများနှင့် shared အသုံးပြုသူများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှား, t(70) = -0.063, p > .05 ။ ထို့အပြင် PED ၏ subscales များသည်အုပ်စုသုံးစုအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမတွေ့ရပါ။
လွတ်လပ်သောအလားတူပင်တစ်ခု tအဆိုပါ PCES NED ရမှတ်၏ -test သိသာထင်ရှားသောအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖေါ်မ t(70) = -0.194, p > .05 ။ NED subscales တစ်ခုတွင် LG သည်လွတ်လပ်သည် t-test နှိုင်းယှဉ် (တစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားအမြင်ထုတ်ဖော်ပြသM မျှဝေသုံးစွဲသူများထက် = 1.68) [M = 1.96; t(138) = -2.10, p = .036] ။
ယေဘုယျအားနည်းလမ်းနှင့်စံသွေဖီစားပွဲတင်အတွက်တင်ပြကြသည် 3, ဤဖော်ပြရန်နောက်ထပ်အသုံးပြုမှုအဆင့် (LFU vs. HFU) ကဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရသည်။
စားပွဲတင်3။ တစ်ခုချင်းစီကိုမှီခို variable ကိုများအတွက်အုပ်စုနှစ်စုအားဖြင့်နည်းလမ်, စံသွေဖီနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလ (95%)
၏ range n 75-84 65-92
အထီး (%) 32.1 34.8
ကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု 25.18 (5.72) ** (24.01-26.51) 23.28 (5.47) (22.78-25.02)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု 21.06 (12.91) (18.45-23.95) 23.37 (14.08) (11.90-16.06)
ရင်းနှီးမှု 6.08 (0.99) ** (5.85-6.28) 5.57 (1.43) (5.47-6.03)
စှဲလနျးခွငျး 5.87 (1.12) * (5.62-6.10) 5.52 (1.35) (5.37-5.94)
ကတိသစ္စာ 6.20 (1.31) * (5.41-5.78) 5.88 (1.46) (5.20-5.59)
ဗေဒင် 1.75 (1.13) (1.49-2.00) 1.87 (1.25) (1.56-2.18)
ဗေဒင် 2.46 (1.18) (2.21-2.72) 2.72 (1.04) (1.6-2.18)
*p = .10, **p = .05 ။
ယေဘုယျအားဖြင့် LFU HFUs ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကဖော်ပြခဲ့သည်။ LFU [ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ခဲ့t(174) = 2.13, p = .035] နှင့်ပိုမိုမြင့်မားရငျးနှီးရမှတ်များ [t(174) = 2.76, p HFU ထက် = .006] ။ SEM အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေတွင်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကတိက ၀ တ်ပြုမှုတို့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။
ယေဘုယျအား HFU (M = 15.74) LFU ထက်သာ။ ကြီးမြတ်အပြုသဘောရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှုများအစီရင်ခံတင်ပြM = 13.70; t(138) = -1.95, p = .053] ။ အောက်ပါအပြုသဘော subscaling အပေါ်သိသိသာသာနှင့်အနည်းငယ်မျှသာသိသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်: SL [HFU M = 3.45; LFU M = 2.96; t(138) = -2.02, p = .045], ATS [HFU M = 3.45; LFU M = 2.99; t(138) = -1.95, p = .053] နှင့် SK ကို [HFU M = 4.33; LFU M = 3.75; t(138) = -2.08, p = .040] ။ အခြားအ subscales အပေါ်မျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။
SEM အသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းဖြတ်ပြီး NED PCES အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကြ၏ သို့သော် SL subscale ဘယ်မှာ HFUs (အပေါ်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏M = 2.43) LFU ထက်သာ။ ကြီးမြတ်ဆိုးကျိုးများအစီရင်ခံတင်ပြM = 2.04; t(138) = -2.57, p = .011] ။ အခြားအ subscales အပေါ်မျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကစုံတွဲများအတွက် SEM ၏အသုံးပြုမှုကိုဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, အသုံးပြုမှု၏ရိပ်မိအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်မှု (ဥပမာ, IPC) နှင့်ဆက်စပ်သောဘယ်လိုလေ့လာခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် SEM ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်မပတ်သက်ပါ။ အထူးသဖြင့်မည်သူမျှမသုံးသောစုံတွဲများသည်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီရှိသည့်စုံတွဲများထက်ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်ကျေနပ်မှုပိုမိုရရှိစေသည်။ ဤသည်ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည် (Cooper et al ။ , 1999; Manning, 2006), SEM ၏တိုက်ပိတ်အသုံးပြုမှုကိုအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များအတွက်ရလဒ်များကြောင့်ဆန္ဒပြနေသော။ ထို့ကွောငျ့တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီ SEM သုံးပြီးသောအခါစုံတွဲများတကယ်ခံစားနေရပြီးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စုံတွဲများ SEM အသုံးပြုခြင်းမှမပြောဘဲ နေ. ဖြစ်စေ, သူတို့ SEM အသုံးပြုချင်လျှင်, သူတို့သည်မှာအနည်းဆုံးအသုံးပွုသငျ့ပါလျှင်သို့သော် SEM ၏အသုံးပြုမှုကိုမျှဝေခဲ့သောစုံတွဲသည် non-အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများထံမှကွဲပြားမပေးထားပါကဆကျဆံရေးအပျေါအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည် စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်, အစားတစ်ဦးချင်းစီ။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ထိုကဲ့သို့သော IPC အဖြစ်ဆက်ဆံရေးဟာဆောက်လုပ်ရေးဆက်ဆံရေးအတွက် SEM အသုံးပြုမှုအပေါ်မှာအခြေခံခြားနားသည်။ ကျား, မသက်ရောက်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပနှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများသည် non-အသုံးပြုသူများနှင့် shared အသုံးပြုသူများသည်ထက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးသိသိသာသာလျော့နည်းရငျးနှီးမှုနှငျ့ကတိကဝတ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက် SEM ကိုသုံးပါလျှင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်တိုက်ပိတ် SEM အသုံးပြုမှု၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အတူရငျးနှီးမှုနှငျ့ကတိကဝတ်များလျှော့ချရေး negated စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါဒေတာကိုနှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက် SEM အသုံးပြုသောဘယ်မှာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက် SEM အသုံးပြုမှုကနေကြားနေဘယ်မှာရငျးနှီး, ကတိကဝတ်များနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပစ္စုပ္ပန်၏အလားတူအဆင့်ဆင့်ခဲ့သူတွေကိုဆက်ဆံရေးဆိုလို။ (ထိုကဲ့သို့သောရငျးနှီးမှုနှငျ့ကတိကဝတ်အတိုင်း) ကြားဆက်ဆံရေးဆောက်လုပ်ရေးအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ SEM အသုံးပြုမှုဆက်ဆံရေးအတွက်မိတ်ဆက်သည်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရငျးနှီးသို့မဟုတ်ကတိကဝတ်၏အောက်ခြေအဆင့်ရှိသူအဆင့်မြင့်ရှိသူများကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သို့မဟုတ်အတူတကွ SEM ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်နေစဉ်, တစ်ဦးချင်း SEM ကြည့်ရှုရန်ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ နောက်ထပ်ရှင်းပြချက် SEM ၏ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးချင်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်လိင်ဝတ္ထုနှိုးဆွဘို့မိမိတို့အလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ပိုများသောအထူးသ, တူညီတဲ့အထပ်ထပ် SEM သုံးပြီးအဖြစ်နှစ်လိုဖွယ်သို့မဟုတ်ဝတ္ထုမည်မဟုတ်ပါ။
ယေဘုယျအားမည်သို့မည်ပုံမကြာခဏတစ်စုံတစ်ဦးက SEM အသုံးပြုသူများသည် '' အကြိုးဆကျတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်ရှုမြင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု HFU သူတို့ရဲ့ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်အနိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်နွေးထွေးမှုရှိဖို့ကပိုဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့သည်လည်းနည်းပါးလာရိပ်မိအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအစီရင်ခံနေစဉ်သို့သော် HFU, မျိုးစုံ domains များဖြတ်ပြီး, LFU ထက်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုရိပ်မိအပြုသဘောသက်ရောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်ပိုပြီးမကြာခဏ SEM ကိုသုံးပါတဲ့သူတွေကိုအကြီးအကျယ်သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင် HFU လျှော့ချရငျးနှီးသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ရလဒ်များ, ဒါမှမဟုတ်အဆုံးစွန်သော variable တွေကို သာ. ကြီးမြတ် SEM အသုံးပြုမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်စေ, SEM အသုံးပြုမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကသူတို့စိတ်ကူးယဉ်ဆက်ဆံရေးတွေလည်းထိခိုက်နစ်နာမှာဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထို့အပွငျဖြစ်ကောင်းကြောင့်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငှါ, အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအပြုသဘောရွေးချယ်မှတ်ဉာဏ်ဘက်လိုက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
ဒီလေ့လာမှုကအားသာချက်များစွာပါဝင်သည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ကောလိပ်ကျောင်းသားနှင့်လူထုပါဝင်သူတစ်ဦးရောနှောနမူနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာ (65%) ၏အများစုအသိုင်းအဝိုင်းသင်တန်းသားများထံမှလာထားရှိခြင်းယေဘုယျတိုးပွားစေပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကစုံတွဲများအတွက် SEM အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်ရာစုံတွဲများအတွက် SEM အသုံးပြုမှု, မျိုးစုံကိုအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးမျိုးစုံ variable တွေကိုဆန်းစစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုများတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြန်ဆိုသည့်အခါသို့သော်န့်အသတ်များစွာရှိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာစစ်တမ်းအွန်လိုင်းစုဆောင်းနှင့်ဤစစ်တမ်းများတွင်ဖုံးလွှမ်းသည့်အကြောင်းအရာများသဘာဝအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြရ၏ အရှင်တစ်ဦး Self-Selection ကိုဘက်လိုက်မှုများအတွက်အလားအလာရှိနေပါသည်။ ဒါ့အပြင် သာ. ကြီးမြတ်ပါဝါနှင့်အတူဖြစ်ကောင်းပိုကြီးတဲ့နမူနာအရွယ်အစားပိုကောင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အလင်းဖို့အကြံပြုရှိပြီးသားကွဲပြားခြားနားမှုမဆိုဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်သာ dyadic ဆက်ဆံရေးဟာအတွင်းလူတစ်ဦး၏ SEM အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်မသိဘဲ SEM ကြည့်ရှုနေသည်ဖြစ်စေမအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအတွင်းသဖွငျ့ variable တွေကိုရှိပေမည်။
အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတိုး၏အ variable တွေကိုအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များ၏ SEM အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ဘူး။ SEM မကြာခဏလှည့်စားပါဝငျသညျကိုအသုံးပြုဖို့ကတည်းကအနာဂတ်လေ့လာမှုများမိတ်ဖက်အသုံးပြုမှုကိုလျှို့ဝှက်သောအခါရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအပေါ် SEM အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုများရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်ဆံရေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်အကဲဖြတ်ရန်သငျ့သညျ။ ထို့အပွငျစမ်းသပ်အစိတ်အပိုင်းများ၏မရှိခြင်းပေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ directionality မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ ထို့အပွငျသုံးစွဲဖို့ related အလားအလာပြုပြီနှင့်မော်ဒရှိစေခြင်းငှါ, ထိုအစူးစမ်းခံရဖို့သေးရှိသည်။ တစ်ဦး longitudinal ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအနာဂတ်လေ့လာမှုများရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက် SEM အသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးတက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ပါလိမ့်မယ်အရာ, အကြိမ်ပေါင်းများစွာအချက်များမှာဤအ variable တွေကိုအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်။ စုံတွဲများအဘို့အအပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များဆုံးဖြတ်ရန်သောတိကျတဲ့ variable တွေကိုနားလည်ခြင်းနှင့် SEM အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာ variable ကို၏ directionality ရှာဖွေစူးစမ်းလာမည့်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အားလုံးစာရေးဆရာများသည်ဤလေ့လာမှု၌ရှိသမျှသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ဤသည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် JM ရဲ့စာတမ်း၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူမစိတ်ကူးရေးဆွဲရေး, လေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့် analysis နှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးအပါအဝင်လေ့လာမှုအားလုံးရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ CTW နှင့် MBS ကဒီစာမူကိုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ JM ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်နည်းပြ။ ထို့ပြင်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးနောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တည်းဖြတ်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများနောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
Allen, အမ်, D'Alessio, D. , & Brezgel, K. (1995) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ် meta-analysis လုပ်ခြင်း။ II ။ ထိတွေ့ပြီးနောက်ကျူးကျော်။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 22 (2), 258-283 ။ Doi: 10.1111 / j.1468-2958.1995.tb00368.x CrossRef
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး, O. , & Tlusten, D. (2010) ။ ရငျးနှီးမှုနှငျ့ဆငျးရဲခွငျး - လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာပုံများအမျိုးသမီးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပုံဖော်ခြင်း။ လိင်, 13 (5), 599-623 ။ Doi: 10.1177 / 1363460710376492 CrossRef
Bergner, R. , & Bridges, အေ (2002) ။ ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအတွက်မိုးသည်းထန်စွာညစ်ညမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အရေးပါမှု: သုတေသနနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 28 (3), 193-206 ။ Doi: 10.1080 / 009262302760328235 CrossRef, Medline
တံတားများ, အေ (2008a) ။ ရိုမန်းတစ်စုံတွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမိတ်ဖက်အသုံးပြုမှု: dyadic နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဘို့သိမြင်မှု၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ။ စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း abstraction အင်တာနေရှင်နယ်, 69, 666 ။
တံတားများ, အေ (2008b, နိုဝင်ဘာလ) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ Non-စွဲလမ်းအသုံးပြုမှု Dyadic အကျိုးဆက်များ။ ခံတွင်းတင်ဆက်မှုအပြုအမူနှင့်သိမှုကုထုံး Orlando တွင်, FL များအတွက်အစည်းအရုံးမှာပေးအပ်သည်။
တံတားများ, အေ, & Morokoff, P. (2010) ။ လိင်မီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ကွဲစုံတွဲများအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခြင်း။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး, 18, 562-585 ။ Doi: 10.1111 / j.1475-6811.2010.01328.x CrossRef
Carnes, P. ဂျေ (1992) ။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက။ စင်တာစီးတီး, MN: Hazelden ။
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက် - ထောင်စုနှစ်သစ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း။ CyberPsychology & Behavior, 1 (2), 187-193 ။ Doi: 10.1089 / cpb.1998.1.187 CrossRef
Cooper က, အေ, Putnam, D. , Planchon, အယ်လ်, & Boies, အက်စ် (1999) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း - ကွန်ယက်ထဲ၌ရောထွေးနေခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၆ (၂)၊ ၇၉–၁၀၄ ။ Doi:6/2CrossRef
Deloy, ဂျေ (2007) ။ ကောလိပ်လူတို့တွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ် function ကိုအဖြစ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများ။ စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း abstraction အင်တာနေရှင်နယ်, 68, 2643 ။ (UMI အမှတ် AAI3258500)
Donnerstein, အီး, Donnerstein, အမ်, & အီဗန်, R. (1975) ။ Erotic လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကျူးကျော်: တားစီး၏လွယ်ကူချောမွေ့။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 32, 237-244 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.32.2.237 CrossRef, Medline
Drake, R. (1994) ။ စိတ်ရောဂါသူနာပြုများကရှုမြင်အဖြစ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအလားအလာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ။ စိတ်ရောဂါသူနာပြု, 8 (2), 101-106 ၏မော်ကွန်း။ Doi: 10.1016 / 0883-9417 (94) 90040-X ကို CrossRef, Medline
Hudson, ဒဗလျူ, Harrison, D. , & Crosscup, P. (1981) ။ dyadic ဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုကိုတိုင်းတာရန်တိုတိုပုံစံစကေး။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 17 (2), 157-174 ။ Doi: 10.1080 / 00224498109551110 CrossRef
Hunsley, အမ်, အကောင်းဆုံး, အမ်, Lefebvre, D. , & Vito, ဂျေ (2001) ။ ခုနစ်ခုသောပစ္စည်းများတိုတောင်းသောညှိနှိုင်းမှုစကေး၏ပုံစံ - ဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှုအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား။ မိသားစုကုထုံး၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 29 (4), 325-335 ။ Doi: 10.1080 / 01926180126501 CrossRef
Lemieux, R. , & Hale က, ဂျေအယ်လ် (2000) ။ အိမ်ထောင်သည်များအကြားရင်းနှီးမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကတိကဝတ်များ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏တြိဂံသီအိုရီကိုနောက်ထပ်စစ်ဆေးခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ, 87 (3, Pt ။ 1), 941-948 ။ Doi: 10.2466 / PR0.87.7.941-948 CrossRef, Medline
Manning, ဂျေ (2006) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - အိမ်ထောင်ဖက်၏လိင်အရစွဲလမ်းစေသော၊ A. Scott Loveless & Thomas B. Holman (Eds ။ ) တွင်၊ ထောင်စုနှစ်သစ်အတွင်းမှမိသားစု - သဘာဝသယံဇာတကိုထောက်ခံကြောင်းကမ္ဘာ့အသံများ (စ။ ၃၇၄-၃၈၄) Westport, CT: Praeger Publishers / Greenwood Publishing Group ။
Oddone-Paolucci, အီး, Genuis, M. , & Violato, C (2000) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဝေသည့်သုတေသနပြုမှု၏ meta-analysis Violato, C, Oddone-Paolucci, အီး, & Genuis, M. (Eds ။ ), ပြောင်းလဲနေသောမိသားစုနှင့်ကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (စစ။ 48-59) ။ Aldershot, အင်္ဂလန် - Ashgate Publishing Ltd.
Ropelato, ဂျေ (2010) ။ ထိပ်တန်း 10 အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစာရင်းဇယား။ ထိပ်တန်း 10 Reviews ။ မှရယူရန် http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html
Schneider, ဂျေပီ (2000a) ။ cybersex သင်တန်းသားများကိုတစ် ဦး ကအရည်အသွေးလေ့လာမှု: ကျားကွဲပြားမှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ကုထုံးများအတွက်သက်ရောက်မှု။ လိင်စွဲ & compulsivity,7(4), 249-278 ။ Doi: 10.1080 / 10720160008400206 CrossRef
Schneider, ဂျေပီ (2000b) ။ မိသားစုအပေါ်ဆိုက်ဘာဆက်စွဲမှု၏ဆိုးကျိုးများ - စစ်တမ်းတစ်ခု၏ရလဒ်။ လိင်စွဲ & compulsivity,7(1), 31-58 ။ Doi: 10.1080 / 10720160008403700 CrossRef
Sternberg, R. (1986) ။ မေတ္တာတော်ကိုတစ်ဦးကတြိဂံသီအိုရီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 93 (2), 119-135 ။ Doi: 10.1037 / 0033-295X.93.2.119 CrossRef
Wildmon-White, အမ်, & လူငယ်, ဂျေ (2002) ။ လိင်စွဲလမ်းသောယောက်ျားများနှင့်လက်ထပ်အမျိုးသမီးများမိသားစု၏မူလလက္ခဏာများ။ လိင်စွဲ & compulsivity,9(4), 263-273 ။ Doi: 10.1080 / 10720160216042 CrossRef
Yucel, D. , & Gassanov, အမ်အေ (2010) ။ သရုပ်ဆောင်မင်းသားနှင့်လက်တွဲဖော်စုံတွဲများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုဆက်စပ်မှု။ လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသန, 39 (5), 725-738 ။ Doi: 10.1016 / j.ssresearch.2009.09.002 CrossRef
Zillmann,,, & Bryant, ဂျေ (1984) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Malamuth, N. အမ် & Donnerstein, အီး (Eds ။ ), ညစ်ညမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော် (စစ။ 115-138) ၌တည်၏။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်။ CrossRef
Zillmann,,, & Bryant, ဂျေ (1988) ။ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်အပြာစာပေ၏သက်ရောက်မှု။ အသုံးချလူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 18, 438-453 ။ Doi: 10.1111 / j.1559-1816.1988.tb00027.x CrossRef